Oke Osimiri Galili: njirimara. nhazi, ihe dị ndụ dị ndụ na ihe egwu | Meteorology netwọkụ
Oke osimiri Galili
El oké osimiri nke Galili A maara ya n'ọtụtụ akụkụ ụwa dị ka oke osimiri, mana na mpaghara ndị ọzọ, a na -akpọ ya ọdọ mmiri. Ọ bụkwa echiche dabara na njirimara ka anyị ga -ahụ n'isiokwu a. A maara ya na Near East dị ka Ọdọ Tiberiades ma ọ bụ Ọdọ Mmiri Generaset. Ọ bụ ọdọ mmiri dị mma nke dị n'ogo 209 mita n'okpuru oke osimiri ma nwee njirimara pụrụ iche.
Yabụ, anyị ga -enyefe akụkọ a ka ọ gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara njirimara, nhazi na mmalite nke oke osimiri Galili.
2 Nhazi nke Oké Osimiri Galili
3 Ihe dịgasị iche iche
4 Iyi egwu site na Oke Osimiri Galili
5 Uru akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị
EỌdọ mmiri ọdọ mmiri dị mita 209 n'okpuru oke osimiri, nke dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Israel, n'ebe ugwu nke Ndagwurugwu Jọdan nakwa n'ụsọ osimiri nke obodo Taịbirias. Ọdọ mmiri ya gụnyere mpaghara Israel, Syria, na Lebanon. Ndị Kraịst na -ewere ya dị ka ihe nkiri sitere n'akụkụ dị iche iche nke Akwụkwọ Nsọ, gụnyere Jizọs ka ọ na -eje ije na mmiri.
Oké Osimiri Galili bụ naanị ọdọ mmiri na -asọ mmiri dị mma n'Izrel. Mpaghara ahụ dị ihe dị ka square kilomita 164-166, ogologo ya bụ kilomita 20-21, nke kachasịnụ bụ kilomita 12 ruo 13 na olu ya bụ square kilomita anọ. Ebe kacha omimi ya dị na ndịda ọwụwa anyanwụ, mita 44-48, yana ịdị omimi nke mita 25,6-26. Isi iyi dị n'okpuru ala na -enye ya ma ọ bụ n'akụkụ Osimiri Jọdan. Osimiri na -agafe ọdọ ahụ wee na -aga na ndịda ihe dịka kilomita 39. Obere mmiri ndị ọzọ, dịka iyi Golan na boulev, na -asọpụta mmiri ha n'ugwu Galili.
Mpaghara oke osimiri na -adịkarị ọkụ n'oge ọkọchị na oke oyi n'oge oyi, na okpomọkụ nke 14ºC. A na -echekwa ụfọdụ ebe akụkọ ihe mere eme na okpukpe dị mkpa n'ụsọ osimiri, dị ka Kapanọm n'ime Akwụkwọ Nsọ.
Nhazi nke Oké Osimiri Galili
Oké Osimiri Galili ka usoro tectonic hiwere. Ndagwurugwu ebe ọ dị bụ nkewa nke efere Arab na Afrịka na mmụba nke oke osimiri. Mmetụta ịda mba ahụ bidoro na ngwụcha Pliocene, na mgbe e mesịrị nsị mmiri na obere mmiri nwere akụkụ mpaghara ya. Ya mere, Oké Osimiri Galili na Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ bụ ndọtị nke Osimiri Uhie Rift.
Eziokwu na -atọ ụtọ bụ na ụwa nwere oge udu mmiri karịsịa n'oge Quaternary, emesịa Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ, nke dị ugbu a na ndịda Oké Osimiri Galili, gbasaa wee gbasaa ruo mgbe ọ rutere na ya, mana mmiri ahụ malitere ịlaghachi oge ụfọdụ afọ 20.000. .
Ọnọdụ ihu igwe dị mma na mmiri zuru ezu na -emepụta ala na -eme nri, nke na -amasị uto nke osisi dị iche iche. Ịkọ ụbọchị, unere, mkpụrụ osisi citrus na akwụkwọ nri na -aga nke ọma kemgbe ọtụtụ narị afọ, na ahịhịa ahịhịa dị n'akụkụ ụsọ mmiri abụghị ihe a na -ahụkarị. Mmiri ahụ nwere zooplankton na mmiri dị iche iche na mmiri mmiri na ọkara mmiri (dika Mkpụrụ osisi Potamon), mollusks (dịka Otu ọdụ ụgbọ elu y Falsipygula Barroisi), microalgae na azụ (dịka Tristramella simonis, tristramella sacra, Acanthobrama terraesanctae, Ezinụlọ Damsel, Silurus). ezinụlọ na azụ), tentacles na ụdị tilapia (Tilapiini), nke a maara dị ka San Pedro. Ụfọdụ azụ nwere njikọ chiri anya na azụ ndị ọzọ bi na ọdọ mmiri ndị Africa.
Ruo n'etiti narị afọ nke XNUMX, otter Europe (Lutra mara mma) bụ anụ na -agba ara na -aga na mmiri Galili.
Iyi egwu site na Oke Osimiri Galili
Ịkụ azụ bụ ọrụ akụ na ụba dị mkpa na Oké Osimiri Galili kemgbe oge ochie. Agbanyeghị, n'ịtụle na e wuru obodo oge ochie gbasara akụkọ Ndị Kraịst na ya, njem amalitela. Taa, ọ bụ mpaghara ama ama ebe ị nwere ike nọrọ ezumike gị n'otu n'ime osimiri. N'ezie, ihe mmadụ na -eme nwere mmetụta na ahụike nke gburugburu ebe obibi.
N'ime afọ akọrọ, oke mmiri na -agbada nke ukwuu, nke na -echegbu ndị na -ahụ maka gburugburu ebe obibi, n'ihi na oke osimiri na -enye ndị Israel mmiri ọ drinkingụ drinkingụ na, ka ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na -amụba, ọchịchọ ya na -abawanye. Ndị mmadụ na -enwe nchegbu na mmiri ahụ ga -agbanwe nnu n'ihi na enwere isi mmiri mmiri nnu n'okpuru. N'aka nke ọzọ, ụdị Tristramella sacra ahụbeghị kemgbe 1990s, yabụ a na -ewere ya n'ezie ka ọ nwụọ.
Uru akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị
Oziọma ndị Kraịst na -ekwu na Jizọs rụrụ akụkụ nke ozi ya na ọrụ ebube ụfọdụ n'ụsọ ọdọ mmiri na -emighị emi. Ndị ọbịa ndị Juu guzobere kibbutz mbụ dị nso. N'amụma ụfọdụ nke ndị Alakụba ọ na -egosi na ụfọdụ isi mmiri dị n'okpuru ala na -asọba n'ime ọdọ, mana ọtụtụ mmiri na -esite na Osimiri Jọdan, nke na -esi na Lebanon nke dị n'ebe ugwu na -asọba na Israel na Osimiri Jọdan na ndịda.
Oké Osimiri Galili (mgbe ụfọdụ a na -akpọ Ọdọ Tiberias ma ọ bụ Ọdọ Mmiri Kinneret) dị n'ime Ndagwurugwu Rift Jọdan, nkụda mmụọ dị warara nke malitere mgbe efere Arabian kewapụrụ onwe ya na Africa ọtụtụ iri nde afọ gara aga. Ọtụtụ idei mmiri na -asọba n'akụkụ ọdọ mmiri na ndịda A tụgharịala ha n'ime ala ọrụ ugbo, na -egosi agba ndụ ndụ na -enwu gbaa.
Oké Osimiri Galili abụrụla ebe ndị njem ala nsọ na -agakarị. Agbanyeghị, n'ime iri afọ ndị na -adịbeghị anya, ọnọdụ ọdọ mmiri ahụ na -esiwanye ike. N'ime iri afọ abụọ gara aga, ọkwa mmiri agbadala nke ukwuu, na -eru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa kacha nta na akụkọ ntolite na 2018. Obere mmiri na -eme ka ọdọ ahụ dị nnu, na -eme ka ọ ghara ịba uru dị ka isi iyi mmiri ọ drinkingụ .ụ. Mgbanwe ndị a na -etinyekwa ọnụnọ ndị azụ azụ ma na -agba ume ka nsogbu ifuru algae.
Ịghọta ọkwa mmiri na -ada ada na ịchọta ụzọ isi mee ka ha kwụsie ike bụ isiokwu nke ọtụtụ nyocha na mpaghara ahụ. Ihe kpatara ya mbelata gụnyere enweghị mmiri ozuzo, mmụba nke mmiri na mpaghara Lebanon, oke okpomọkụ (nke ga -abawanye uzuoku) na mmụba nke ala ubi na ebe mmiri gbara ya gburugburu n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara oke osimiri Galili na njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke osimiri Galili
Kedu ka ugwu mgbawa si amalite